Nagarik News - लोकतान्त्रिक लोकोत्सव छठ
लोकतान्त्रिक लोकोत्सव छठ
छठ लोकोत्सव मिथिलाञ्चलको सबैभन्दा ठूलो चाड त हो नै साथमा यो सबैभन्दा लोकप्रिय र लोकतान्त्रिक पनि रहेको छ । आज देशमा चारैतिर लोकतन्त्रको लालिमा फैलिएको छ । यस लोकतान्त्रिक वातावरणमा छठ लोकोत्सवको लोकप्रियता पनि झन्झन् बढ्दै गएको कुरा यसपालिको छठले प्रमाणित गर्ने नै छ ।
यो लोकोत्सव सुरुसुरुमा मिथिलाञ्चलमा मात्र सीमित थियो, तर अचेल यसको परिधि बृद्धि हुँदै गएको छ । अब त राजधानीको मुटुमा अवस्थित रानीपोखरीमा पनि यो पर्व मनाउने परम्परा सुरु भइसकेको छ । यसअघि राजधानीकै वाग्मतीका विभिन्न घाटमा यो पर्व मनाउने गरिन्थ्यो । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने राजधानीवासीका लागि पनि यो पर्व नौलो रहेन । संस्कृतिको कुनै सीमा हुँदैन । यो असीम एवं असीमित क्षेत्रमा फैलिएको हुन्छ, छिमेकी राष्ट्र भारतको बिहार र उत्तरप्रदेशमा पनि यो पर्व मनाउने परम्परा छ । बिहारको राजधानी पटनाको छठको छवि र छटा त विश्वव्यापी भइसकेको छ । नेपाली भूभागमा पनि यसको गौरवशाली परम्परा छ । थाइल्यान्डको तमाशात विश्वविद्यालयले तयार पारेको 'जनकपुर यात्रा' वृत्तचित्रमा मिथिलाञ्चलको प्राचीन राजधानी जनकपुरमा मनाइने छठको छायांकन गरिएको छ र निकट भविष्यमा बैंककमा मनाइने नेपाली सप्ताहमा यसको प्रदर्शन हँुदैछ । सो वृत्तचित्र काठमाडौँ र जनकपुरमा पनि प्रदर्शन गरिने कार्यक्रम छ । अहिले छठ लोकोत्सव नेपाल र भारतवर्षमा मात्र सीमित नभएर फ्रान्सको राजधानी पेरिससम्म पुगिसकेको छ ।
छठको प्रारम्भ सृष्टिको उषाकालदेखि नै भएको कुरा विभिन्न धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेख छ । सूर्योपासनासँग सम्बन्धित भएकोले यस पर्वको प्रारम्भ सूर्यको अवस्थिति र अस्तित्वसँग जोडिएको छ । 'हे जाज्वल्यमान सूर्यदेव, जब तिमी उषाको काखमा उदाउँछौ तब भक्तजनहरू गीत गाएर तिम्रो स्तुति गर्छन् । मत्स्य पुराणमा यस्तो उल्लेख छ– 'आरोग्य भाष्करोदिच्छेत' अर्थात् सूर्यबाट आरोग्यताको कामना गरिन्छ । पद्म पुराणमा पनि यस कथनको पुष्टि गरिएको छ– 'यथा सूर्योपासना मात्रेण सर्वरोगतां प्रचुच्यते' अर्थात् सूर्योपासनाबाट प्रायः सबै रोग नष्ट हुन्छन् । छठ लोकोत्सवमा सूर्यको पूजाआजा, आराधना र अर्चना प्रमुख हुन्छ । सूर्य साक्षात देवता हुन् । भक्तजनमात्र होइन सृष्टिका सबै मानिस उनलाई आफ्नो नग्न आँखाले सृष्टिको प्रारम्भकालदेखि नै हेर्दै आएका छन् । उनको अस्तित्व एवं अस्मितालाई हेर्दै र स्वीकार्दै आएका छन् । सूर्य पूर्णप्रजातान्त्रिक देवता हुन् । गरिब र धनी, सुसम्पन्न र विपन्नको बीचमा कुनै भेदभाव गर्दैनन् । सम्पन्नहरूको आकाशचुम्बी अट्टालिका र गरिबको झुपडीसमेतमा समानरूपले आफ्नो प्रकाश छर्छन् । यस्ता प्रजातान्त्रिक देवता सर्वप्रिय र लोकप्रिय हुनु स्वाभाविक हो । सूर्य पुराणमा वर्णित कथाअनुसार कार्तिक शुक्ल षष्ठिका दिन सुरु हुने यस लोकोत्सवलाई सर्वप्रथम अत्रिमुनिकी धर्मपत्नी सती अनुसुयाले सुख–समृद्धि र सम्पन्नताका लागि र आफ्नो सुखद सफल दाम्पत्य जीवनका लागि गरेकी थिइन् । सोही समयदेखि यस पर्वको सुरुआत भएको अनुमान छ ।
छठ लोकोत्सव कुनै खास धर्मावलम्बीले मनाउने पर्व होइन । तथापि, यो हिन्दुहरूको ठूलो चाड बनेको छ । पछिल्लो समय यसको लोकप्रियता बढ्दै गएकोले अन्य धर्मावलम्बीले पनि मनाउन थालेको पाइन्छ । तराईप्रदेशमा बसोबास गर्ने सबै धर्मावलम्बीले यो पर्व मनाउने परम्परा बस्न थालेको छ । अतः यो लोकोत्सवले सबै धर्मको समन्वयको काम पनि गरेको छ । सुरुसुरुमा आदिवासी जनजातिका बीचमा लोकप्रिय र प्रचलित यो पर्व अब सबै जातजाति र भाषाभाषीले मनाउन थालेका छन् । पोखरी र नदीको किनारमा गएर सँगै बसेर यस पर्वलाई श्रद्धा र भक्तिभावले मनाउने गर्छन् । जातजातिको कुनै भेदभाव यहाँ रहँदैन । मधेसमा बसोबास गर्ने पहाडी समुदायमा पनि यो लोकोत्सव उत्तिकै लोकप्रिय हुँदै गएको छ ।
कार्तिक महिनाको प्रारम्भदेखि नै श्रद्धालु शाकाहारी हुन थाल्छन् अर्थात् छठ पर्वको अनुष्ठान गर्ने भक्तजन माछामासु, लसुन, प्याज आदि तामसी भोजनको त्याग गर्न थाल्छन् । छठको चौथो दिन 'चौथी' को व्रत बस्ने भक्तजन स्नान गरेर शाकाहारी खाना जसलाई सथानीय भाषामा 'अरबा अरबाइन' भनिन्छ, त्यो खाने गर्छन् । यसलाई 'नहाखाय' अर्थात् नुहाएर खानु भन्ने गरिन्छ । पञ्चमीको दिन उपवास बस्ने परम्परा छ र नुहाएर नयाँ वस्त्र धारण गरी आआफ्नो इष्टदेवता प्रतिस्थापित भएको कोठामा खानेकुरा पकाइन्छ, जसमा गहुँको पीठोबाट शुद्ध घ्युमा बनाइएको पुरी, गुँड, दूध र अरवा चामलबाट बनाइएको 'खीर' सहित पाकेको केरा र फलफूल अनिवार्य मानिन्छ । यस शुद्ध ठाउँमा मैथिली लोककला अरिपन अंकित गरिन्छ । यहाँ पकाइएको प्रसादलाई पूजापछि घरपरिवारका सबै सदस्यले ढोगेर खाने गर्छन् ।
षष्ठिमा गहुँ र चामलको पीठोबाट क्रमशः ठकुआ (एक प्रकारको रोटी), भुसवा (लड्डु) शुद्ध घ्युमा बनाइन्छ । यसबाहेक केरा, उखु, मेवामिष्ठान्न, कन्दमूल, नरिवल, अम्बालगायत फलफूल सजाएर कुनै जलाशयमा गएर सूर्यलाई अघ्र्य अर्पित गरिन्छ । यसलाई स्थानीय भाषामा सँझिया घाट वा सँझिया अरक भनिन्छ । अरक अर्कको अपभं्रश हो जसको शाब्दिक अर्थ सूर्य नै हो । सप्तमी तिथिको प्रातःकालमा फेरि त्यसै जलाशयमा गएर पूजा अघ्र्य अर्पण गरिन्छ । सूर्योदयपछि सूर्यको दर्शन गरी अघ्र्य प्रदान गरेर समापन गरिन्छ । मैथिलहरू नै अस्ताचलगामी र उदाउने सूर्यको पूजा गर्ने प्राणी हुन् । छठ पर्वको सांगीतिक महत्व पनि अधिक छ । यसको प्रारम्भ र अन्त्य नै संगीतमय हुन्छ । सम्पूर्ण चाड अवधिभरि संगीतको स्वरलहरी महिलाका मुखबाट सुन्न सकिन्छ ।
'काँचहि बाँसके टोकरिया हो ऽऽ
दीनानाथ, टोकरी लचकत जाय !
बाट मे पुछय जे बटोहिया ऽऽऽ
टोकरी केकेर जाय ...............?
आन्हर होयवे रे बटोहिया
अरक टोकरी छठिमाय के जाय ....।'